Kulan Lagaga Hadlayo Midnimada haweenka Soomaaliyeed Oo Lagu Qabtay Magaalada Nairobi | sowora
BRITAIN: eedeysaneyaal loo haysto dambi la xiriira gudniinka hablaha →
Kulankan oo ahaa kulan balaaran ayaa waxaa soo qaban qaabisay hay’ada IIDA waxaana ka soo qayb galay mas’uuliyiin ka kala socday dowlada Soomaaliya, Ururada bulshada rayidka ah,midowga yurub iyo maamul goboleedyada ka jira soomaaliya, waxaana kulankan oo soconayey mudo 4 maalmood ah lagu lafa guray sidoo looga wada shaqayn lahaa midnimada & kor u qaadista haweenka soomaaliyeed.
Gabo gabadii kulankan ay si wada jira dhinacyadii kazoo qayb galay ay shir jaraa’id warbaahinta ugu qabteen Hotel Dasani ee magaalada Nairobi ayaa waxaa ugu horeyn warbaahinta uga warbixisay ujeedka kulankan marwo Duniyo Maxamed Caarshe oo ka tirsan mas’uuliyiinta hay’ada IIDA,iyadoo sheegtay in ay lagama maarmaan tahay in laga xoojiyo haweenka soomaaliyeed dhan walba.
Qamar Deeq Khaliif oo ka tirsan maamulka Juba ayaa iyaduna dhankeeda ka hadashay ahmiyada ay haweenka soomaaliyeed u leedahay inay midoobaan, iyadoo sheegtay inay ku hanweyn yihiin haweenka soomaaliyeed inay helaan Haween mideysan iyo wadan nabad ah oo ay gees ka gees isaga gooshi karaan.
Dhanka kale kulankan ayaa waxaa lagu lafa gurayey saameynta uu haweenka soomaaliyeed ku yeelan karo qorsha hiigsiga cusub ee soomaaliya iyo talooyinka haweenka soomaaliyeed ee ku aadan dariiqa cusub ee la doonayo in lagu dhaqo dalka soomaaliya, sida ay warbaahinta u sheegtay Xaliimo Jaamac Afrax oo ah xubin u dhaq dhaqaaqda arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka.
Waxaana kulan saxaafadeedkan soo afmeeray xildhibaan Maxamed Cali oo kulankan ku matalayey dowlada Soomaaliya,isagoo sheegay in haweenka soomaaliyeed hadii ay midoobaan ay ka qayb qaadan karaan horumarka dalka, isagoo sidoo kale kula taliyey haweenka inay go,aamadooda u soo gudbiyaan aqalka baarlamaanka si looga mira dhaliyo rabitaanka haweenka soomaaliyeed.
Xigasho Radio mogadisho